बिहेमा २५ जनाभन्दा बढी जन्ती जानेलाइ टन्टलापुरघाममा ५ घण्टा उपहार ! - समृद्ध नेपाल
बिहेकै दिन बेहुली छतबाट खसेर ढाड भाँ’चियो, बिहे गर्न आएका बेहुलाले अस्प,तालकै बेडमा सिन्दुर भरे
फेरि अचानक लक्ष्मी गदाल रुँ,दै मिडियामा,अब के होला ?
खुसीको खबर !! रुसले बनायाे एक डोज लगाए पुग्ने खोप, ५० लाख डोज नेपाल ल्याउने तयारी हुदै
बिहेमा २५ जनाभन्दा बढी जन्ती जानेलाइ टन्टलापुरघाममा ५ घण्टा उपहार !
कञ्चनपुर। निषेधाज्ञाको आदेशविपरित बिहेमा जन्ती गएकाहरू कारवाहीमा परेका छन्। निषेधाज्ञामा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने मापदण्डको उल्लंघन गर्दै ४५ जना जन्ती गएका थिए। उनीहरूलाई पाँच घण्टा टन्टलापुर घाममा राखिएको हो। प्रहरीका अनुसार सुकासालबाट भाँसी जादैं गरेको
जन्तीसहितको बसलाई ५ घण्टा होल्ड गरिएको हो। बेहुला र परिवारका सदस्यलाई छोडेर अन्यलाई दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म महेन्द्रनगरस्थित मञ्चमा होल्ड गरिएकोयो पनि भारतको पश्चिम बंगालमा तेस्रो पटक ममता बनर्जी मुख्यमन्त्री हुने भएकी छन्। विधानसभा चुनावमा बनर्जीको
पार्टी तृणमूल कांग्रेसले तेस्रो पटक जित हासिल गरेपछि उनले मुख्यमन्त्री पदमा आज बुधबार शपथ ग्रहण गर्न लागेकी हुन्। कोरोनाका कारण शपथ ग्रहण समारोह सामान्य ढंगमा गरिने बताइएको छ। पश्चिम बंगालमा निर्वाचनपछि हिंसा बढेको छ। त्यहाँ राष्ट्रपति शासनको मागसमेत भएको छ।
पत्रकार महासङ्घमा युनियन प्यानल अगाडि, चौतारी पछ्याउँदै !
उदयपुरमा एक महिलाको मोबाइल चार्ज गर्दा करेन्ट लागेर मृत्यु !
अस्पतालले भर्ना नलिदा उदयपुरकी एक महिलाको मुत्यु !
नेतालाई ४० लाखको गाडी तर गाउमा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स छैन,
शुभ दिन देख्ने बित्तिकै कमेन्टमा ॐ लेखी पोष्ट सेयर गर्नुहोस् !
सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयको यातायात व्यवसायीले गरे विरोध !
‘एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन’ !
दोलखा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का !
२५ वर्षमुनिको उमेर समूहमा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव बढी देखिएको कारण विद्यालय बन्द !
धरहराबाट खसेर भाग्यले बाचेकी रमिला भन्छिन- म जहाँबाट खसेर बाचे त्यहि रोजगारी पाऊँ !
सहकारीले भन्दा चर्को ब्याज लिँदै एनआएसी एशिया, तिरिसकेको कर्जामा ब्याज बढाएर किस्ता तिर्न बोलायो !
६ दिन अघि ICU नपाएर म’रिन्छ कि भनेर पोस्ट गरेका लक्ष्मण रहेनन् अब हामी माझ !